MinSayYar - Page 2237 of 2302 -
နှှလုံးရောဂါအတွက် ကောင်းတဲ့ ပုန်းရည်ကြီး ပုန်းရည်ကြီးဟာ ရှေးယခင်ကနေ ခုချိန်ထိ အချိန်အတော်အကြာ တည်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးဟာ အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ ပဲအနှစ်တမျိုးဖြစ်ပြီး လူကြီးကလေးအားလုံးနီးပါး ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးကို ဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတွေနဲ့ သုပ်စားကြသလို ဝက်သား၊ ငါးကြီးသား စတာတွေနဲ့ ရောပြီးလည်း ချက်စားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲတို့နဲ့ ရောနယ်ကာ ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်၊ ပုန်းရည်ကြီးထမင်းကြော်၊ ပုန်းရည်ကြီးခေါက်ဆွဲသုပ်အနေနဲ့ လုပ်စားကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးကို အထက်အညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ပုဂံ၊ ညောင်ဦး၊ စလေ ၊မြင်းခြံစတဲ့ ဒေသတွေက အများဆုံးထုတ်လုပ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးကို တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားထိပါ တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးကို အများအားဖြင့် ပဲပိစပ် ကနေထုတ်လုပ်ပါတယ်။ တခြားပဲအမျိုးမျိုးတွေနဲ့လည်း ပုန်းရည်ကြီး ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီး ထုတ်လုပ်နည်းအနေနဲ့ကတော့ […]
အမှုအခင်းရှိလျှင်၊ပစ္စည်းပျောက်လျှင်၊နေထိုင်မကောင်းလျှင်၊ချမ်းသာချင်လျှင်၊စစ်တိုက်သွားလျှင် ရွတ်ရမည့် ဂါထာတော်
ဥုံ- သိဒ္ဓိဘုရားထိပ်မှာထား နားမှာ ဗြဟ္မာ ၊ လက္မွာ သိၾကား ၊ ခါးမွာ ဘီလူး ၊ ဒူူးမှာ ခြင်္သေ့ ၊ ခြေမှာ နဂါး ၊ ကိုယ်မှာ ဂဠုန်၊ အစောင့်ထားပါ၏ ။ ဥုံ – ကောက္ကုသံ ၊ ဥုံ – ကောဏဂုံ ၊ ဥုံ- ကဿဖ ၊ ဥုံ – ဂေါတမ ၊ ဥုံ – အရိမေတ္တယျ ၊ ဥုံ – ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါ၏ ။ ဓာတ်တော်ဝင် ၊ မဟာဝင် ၊ ဧရာဝင် ၊ မဟာဝိနယော ၊ ဗောဓိရှစ်တန် ၊ဉာဏ်တော်( […]
ကျောင်းသူတစ်ဦး ဌါးစီးခဲ့တဲ့ အိုးဝေ taxi ပေါ်မှာ ရွှေကလစ်တစ်ခု” ပြုတ်ကျပြီး ကျန်နေခဲ့ပါတယ်
ကျောင်းသူတစ်ဦး ဌါးစီးခဲ့တဲ့ အိုးဝေ taxi ပေါ်မှာ ရွှေကလစ်တစ်ခု” ပြုတ်ကျပြီး ကျန်နေခဲ့ပါတယ် ဟင်္သာတ တက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့လာယူသော ကျောင်းသူတစ်ဦးဌါးစီးခဲ့တဲ့ အိုးဝေ taxi ပေါ်မှာရွှေကလစ်တစ်ခု ပြုတ်ကျပြီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်. အိုးဝေ taxi ဆရာ ကိုလွယ်မင်းကိုမြဝတီရပ်ကွက် သီရိ ၃,လမ်းမှတွေ့ရှိပြီး ဘွဲ့လာယူ‌သူ ကျောင်းသူကိုပြန်လည် ပေးအပ်ဖို့ ရှာဖွေနေပါတယ်။ လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် အိုးဝေဆရာရေ။ ဦးကံ unicode version ဒီနေ့ 20, 12, 2019 နေ့ ဟင်္သာတ တက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့လာယူသော ကျောင်းသူတစ်ဦးဌါးစီးခဲ့တဲ့ အိုးဝေ taxi ပေါ်မှာရွှေကလစ်တစ်ခု ပြုတ်ကျပြီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်. အိုးဝေ taxi ဆရာ ကိုလွယ်မင်းကိုမြဝတီရပ်ကွက် သီရိ ၃,လမ်းမှတွေ့ရှိပြီး ဘွဲ့လာယူ‌သူ ကျောင်းသူကိုပြန်လည် ပေးအပ်ဖို့ ရှာဖွေနေပါတယ်။ လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် အိုးဝေဆရာရေ။ ဦးကံ
သေရေး ရှှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးကိစ္စ ရှိလာလျှင်လုပ်ရမည့် ယတြာ
ရုက္ခစိုးယတြာ…. သေရေးရှှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးသော ကိစ္စ ရှိလာလျှင်လုပ်ပါ ယခု ယတြာအား အမှန်တကယ်လိုအပ်လာမှသာ အသုံးပြုပါလေ။ အိုးအိမ်လိုချင်သူများ အလုပ်လိုချင်သူများ ဝန်ထမ်းများနေရာကောင်းရစေဖို့ နေရာပြောင်း အလုပ်ပြောင်း ကိစ္စများ ရာထူးတိုးချင်သူများ ကားကိစ္စအဆင်ပြေချင်သူများ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေချင်သူများ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စ အဆင်ပြေချင်သူများ အကြွေးတောင်းမရသူများ အကြွေးပြန်ဆပ်ချင်သူများ ငွေကြေးအကူအညီ လိုချင်သူများ စသဖြင့် မည်သည့်အခက်ခဲ ကိစ္စမဆို ရုက္ခစိုးယတြာ ပြုလုပ်လို့ရ၏။ သစ်ပင်ကြီးလေ ညောင်ပင်ကြီးလေ ရုက္ခစိုးသည် အသက်ကြီးလေ ပါဝါကြီးလေပါပဲ ရုက္ခစိုးငယ်တွေက လုပ်နိုင်တာနည်းတယ် ရုက္ခစိုးကြီးတွေက အများကြီးလုပ်နိုင်တယ် ရုက္ခစိုးကြီးတွေက မျက်ခွံတွေပိပြီး မျက်စိပေါ်အုပ်ပိနေတယ် မမြင်ရဘူး နောက်ပြီး ရုက္ခစိုးကြီးတွေက လူတွေပြောတာကို သိပ်မကြားရဘူး မြင်လည်း သိပ်မမြင်ကြတော့ဘူး အနံ့ခံအာရုံ အလွန်ကောင်းကြတယ် ရုက္ခစိုးငယ်တွေက မြင်တယ်ကြားတယ် သူတို့လုပ်ပေးနိုင်တာနည်းတယ် […]
“အမှန်တရားပေါ်ဖို့အတွက် ကူကယ်ရာမဲ့နေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်” လို့ ဗစ်တိုးရီးယား၏ ဖခင်ပြော
မူကြိုကျောင်းသူလေး ဗစ်တိုးရီးယား လိင်အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမှုမှာ သံသယတရားခံ ကိုအောင်ကြီးကို ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားပြီးနောက် တရားခံပျောက်ဆုံးနေပြီး အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ဖို့ လမ်းစပျောက်နေတယ်လို့ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ “လမ်းစပြတ်သွားတာပေါ့။ အမှန်တရားပေါ်ဖို့အတွက် ကူကယ်ရာမဲ့နေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်” လို့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလက Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ တက်နေတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးဟာ လိင်အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ကျောင်းရဲ့ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ အောင်ကြီးကို သံသယတရားခံအဖြစ် ပထမအကြိမ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ သက်သေမခိုင်လုံတဲ့အတွက် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သံသယတရားခံအဖြစ် ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရပြီး ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေခဲ့ရာကနေ ၆ လအကြာမှာ ကျုးလွန်ကြောင်း မပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ။ “ ရဲတပ်ဖွဲ့က အောင်ကြီးတရားခံဖြစ်တယ်လို့ အထက်တရားရုံးတွေ ထပ်လျှောက်ရင်လည်း နှစ်နှစ်ခွဲ […]
ရေမပါပဲ ဘူးရွက်တစ်ခုတည်း နှင့့် ကန်စွန်းဥကို နူးအိနေအောင် ပြုပ်မယ်
ရေလုံးဝမပါပဲ အရသာထူးပြီးအားဖြစ်စေသောဗူးရွက် ကဇွန်းဥပြုတ်နည်း ကဇွန်းဥကိုရေမထည့်ပဲပြုတ်နည်းလေးပါ ။ ။ ” ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်း ” နံပတ် ၁ ။ ပုံ မိမိတို့ပြုတ်မည့်ကဇွန်းဥကို ရေစင်ကြယ် စွာဆေးကြောပြီး ပြုတ်မည့်အိုးအောက်ခြေမှာသန့်စင်ပြီးသားဗူးရွက်များကိုခင်းပြီးကဇွန်ဥများကိုထည့်ပါ ။ ထိုကဇွန်းဥများအပေါ်မှ ဗူးရွက်များကို ပုံ၂ = အတိုင်း လုံအောင်ထပ်ထုပ်ပါ ။ ပုံ ၃ / ၄ = ရေမထည့်ပဲ မီးဖြင့် မိနစ် ၂၀ ခန့်ပြုတ်ပြီးလျှင် အရသာချိုပြီးစိမ့်သော ဗူးရွက်ကဇွန်ဥပြုတ်ကိုရပါပြီ ။ ပုံ ၅ = နူးအိနေသောကဇွန်းဥပြုတ်ကို ထုတ်ယူပြီး ပုံ ၅ မိမိတို့အသင့်စားသုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာ … ( ကျွန်တော်ယခုပုံံပါကဇွန်းဥပြုတ်မှာ ၅၀ ကျပ်သားဖြစ်ပါသည် ) စိုင်း မင်း သန့် […]
အုန်းနို.၊ မျှစ်ချဉ်၊ ဒညင်းသီး၊ မန်ကျည်းသီးတို.အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားသောက်နည်းများ
ဒံပေါက်၊ အုန်းနို.၊ မျှစ်ချဉ်၊ ဒညင်းသီး၊ မန်ကျည်းသီးတို.အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားသောက်နည်းများ” ၁။ အဆီအအိမ့် များလွန်းသော #ဒံပေါက် ထမင်း ကြိုက်သူများ ဒံပေါက် မစားမီ ရှေ့တွင် ရှိသော ပန်းကန်ထဲမှ ပူဒီနံ ရွက်များကို အရင် ဝါးစားပြီးမှ ထမင်းစားပါ။ အဆိပ် အတောက် ကင်းပါသည်။ ၂။ #အုန်းနို့၊ ငံပြာရည်၊ ကြက်ဥ အနှစ်တို့ ပါသော မုန်းဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ ကြိုက်သူများရှေးဦးစွာ မုန်းမစားမီ သံပုရာသီးစိတ် များကို ယူ၍ ဇွန်းထဲတွင် အရည်ညှစ်ချပါ။ ရလာသော ဇွန်းဝက်ခန့် သံပုရာရည် များကို အရင်သောက် ချပြီးမှ မုန့်များကို စားပါကအန္တရာယ် ကင်းသောနည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၃။အဆိပ်အတောက် များသော အသည်းအတွက်မကောင်းသော #မျှစ်ချဉ်ကိုလုံးဝ […]
”မူရင်းအဆိုရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အသိမှတ်ပြု မခံခဲ့ရတာကြောင့်” ဝမ်းနည်းမိတဲ့ ”နီနီဝင်းရွှေ”…..
တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နီနီဝင်းရွှေကိုတော့ မသိသူရှိမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာ စွဲစေခဲ့တဲ့ မြန်မာသံစစ်စစ်သီချင်းကောင်းပေါင်းများစွာကို ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ဖန်တီးသီဆိုခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လော့အင်ဂျလိစ်မြို့မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီး အနုပညာလောကနဲ့အလှမ်းကွာဝေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုပြင်းထန်နေတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါကတော့ Week-8 အထိပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး week-8 ရဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးများ” သီဆိုမှုအပတ်မှာ မူရင်းတေးသံရှင်နီနီဝင်းရွှေသီဆိုထားတဲ့ “မြင့်မိုရ်ထက်မြင့်သော” သီချင်းကို အက်စတာက သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး …. Myanmar Idol မှ Host ဖြစ်သူ ကျော်ထက်အောင်ကတော့ ဒီသီချင်းကို (၁၉၉၁) ခုနှစ်မှာ ဒါရိုက်တာကြည်စိုးထွန်းရိုက်ကူးထားတဲ့ “သမီးနှင့်အမေများ” ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး တေးရေးစန္ဒရားလှထွဋ်၊ပြန်လည်သီဆိုသူ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် လို့ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နီနီဝင်းရွှေကတော့ စင်ပေါ်မှာပြောတဲ့သူကတော့ ဒီသီချင်းနဲ့တော်တော်အလှမ်းဝေးမယ်ထင်လို့ အပြစ်မမြင်ပေမယ့် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီး ဆက်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ […]
“မြဆည်းဆာ”ဘိုးဘွားများခိုလှုံရာရိပ်သာတွင် ထမင်းစားဆောင် တည်ဆောက်ရန်” ရွှေစင် (၇၀)ကျပ်သား” လှူဒါန်းခြင်းအလှူတော်”…….
“မြဆည်းဆာ”ဘိုးဘွားများခိုလှုံရာရိပ်သာတွင် ထမင်းစားဆောင် တည်ဆောက်ရန် ရွှေစင် (၇၀)ကျပ်သား လှူဒါန်းခြင်းအလှူတော် 20.12.2019 မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ မုရောင်းကျေးရွာတွင်မြစေတီ(ရဲကျောင်း)စာသင်တိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြဝါဒ ခံယူ၍ “မြဆည်းဆာ”ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရိန္ဒ(ဦးဇင်းကျောက်ဆည်)မှ ဦးစီးတည်ဆောက်ကာ ခိုကိုးရာမဲ့အဘိုးအဘွားများအား စောင့်ရှောက် ပေးနေသည့် “မြဆည်းဆာ”ဘိုးဘွားများခိုလှုံရာရိပ်သာတွင် တည်ဆောက်မည့် ထမင်းစားဆောင်အတွက် ရွှေစင် (၇၀)ကျပ်သား တိတိအား မော်လမြိုင်၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း အမှတ်(30/A)နေဒေါ်လန်းမိသားစုမှ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် “ဇာနည်ဘွား” အထူးကု ဆေးခန်းတွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်း …. မြစေတီစာသင်တိုက်ဆရာတော်ကျိုက်ခမီကျောင်းဆရာတော် နှင့်မြဆည်းဆာ ဆရာတော်တို့ထံသဒ္ဒါတရားပြတ်သားစွာဖြင် ရေစက်ချ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုလို လှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် မိခင်ကြီးဒေါ်လန်းနှင့်တကွသားသမီး မြေး မြစ် ဆွေမျိုးများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ တလုံးတဝ ပြည့်ဝကြပါစေ။ အဖွား ဒေါ်လန်း လည်း […]
” စစ်တမ်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မန္တလေးတိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်း အချမ်းသာဆုံးဖြစ် “
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာ မန္တလေးနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဟာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့ အဆင်းရဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ၂၀၁၉-၂၀ Citizen’s Budget ပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲမှုအညွှန်းကိန်းအရ သိရပါတယ်။ Citizen’s Budget (နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘတ်ဂျက်) ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့မေခရိုစီးပွားရေး အခြေအနေ၊ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးခန့်မှန်းခြေ၊ စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်၊ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ၊ ပြည်ပ အကူအညီရငွေ စတာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ သိအောင် အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတို့ဟာ ၂၀၁၇ ဆင်းရဲမှုညွှန်ကိန်းအရ ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းစီရှိကြပြီး ရန်ကုန်ကတော့ ၁၃ ဒသမ ၇ ဖြစ်ပါတယ်။ ညွှန်ကိန်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ချင်းပြည်နယ်က ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က ၄၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
Previous 1 … 2,236 2,237 2,238 … 2,302 Next